Ihe nkiri iFoto n'efu na Mac App Store maka obere oge | Esi m mac
iFoto Viewer n'efu na Mac App Store maka obere oge
[Kwadoro] Ngwa ahụ agbadatala na ọnụahịa ya nke € 9,99 awa ole na ole gara aga.
Anyị na-ewetara gị ngwa dị mma iji lee foto, enwere ike ịchọta ya na ngwa ngwa Apple maka Mac anyị.Ọ nweghịkwa ihe karịa nke a, ngwa dị mfe ma bara uru iji lelee foto. A priori, o nwere ike iyi oke ihe omume, ebe ọ bụ na ngwa ndị ọzọ, gụnyere Tugharia na-arụ ọrụ a.
ihe ngosi iFoto, o nwere ọtụtụ ọrụ maka ilele foto karịa ngwa ndị ọzọ na nke ya. Ihe kachasị amasị m bụ ikike imeghe usoro ọ bụla, gụnyere nnukwu RAW.
Nzọụkwụ mbụ ga-abụ mbubata foto. Enwere ike ime nke a site na ịhọrọ ha ozugbo, ịhọrọ folda, ma ọ bụ ịdọrọ foto ma ọ bụ folda na ngwa ahụ.
Mkpebi dị na ngosipụta foto bụ mkpebi dị eluọ bụrụgodi na ejiri ya na ngosipụta retina. Ọrụ ọhụụ bụ na-emegharị foto na-akpaghị aka mgbe ọ na-achọpụta na abatabeghị ya n'ọnọdụ ziri ezi. Ọrụ a, dị ka ọ dị mfe dị ka ọ nwere ike iyi, ana m agwa gị na ọ ga-adị oke mma na Foto, ngwa foto Apple, n'ihi na mgbe ị jikwaa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke foto ọ nwere ekele na ị họrọ ụzọ ziri ezi. Nhọrọ ndị ọzọ yiri ya, bụ ichekwa ọnọdụ mbugharị mgbe anyị gbanwere foto, ya bụ, ọ naghị alaghachi n'ọnọdụ ọkwa nke foto ahụ.
Enwere ọtụtụ usoro ngosi:
Ọnọdụ ihuenyo zuru oke: ịhụ foto na ihe ọ bụla ọzọ, na-enweghị ngwa ngwa.
Ọ́bá akwụkwọ ịnyagharịa n'etiti usoro nchekwa.
Ọnọdụ tọmbneelụ: ilele ọtụtụ foto n'otu oge ma nwee ike ịhọrọ ihe achọrọ / s.
Ọnọdụ EXIF: iji nyochaa foto site na ISO, ụdị igwefoto, ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ, na
Ihe ngosi mmịfe mode: ile foto n'otu n'otu na akpaghị aka.
N'ikpeazụ, enwere ike ịkekọrịta foto netwọk mmekọrịta: Facebook, Twitter, Flickr na saịtị ndị ọzọ
The ngwa bụ free na Mac App Store, mgbe ruo ugbu a ọ nwere ga-zụrụ maka € 9,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » iFoto Viewer n'efu na Mac App Store maka obere oge
vla1956 Virginia dijo
liarsssssss ọ dịghị ihe bụ free
Beats X dị ugbu a na agba niile yana ndenye aha n'efu na Apple Music 3 ọnwa
Apple na-agbasa ọnụọgụ nke mba ịzụta ngwugwu Pro Apps